Celcelis ahaan macaamilku wuxuu la kulmaa mug weyn oo xayaysiis ah 24-kii saacba. Waxaan ka soo gudubnay celcelis ahaan dadka waaweyn ee loo soo bandhigey 500 xayeysiis maalintii 1970-yadii illaa ugu badnaan 5,000 oo xayeysiis maalintii ah Taasi waa qiyaastii 2 milyan oo xayeysiis sanadkii ah oo qofka celcelis ahaan uu arko! Tan waxaa ka mid ah raadiyaha, telefishanka, raadinta, warbaahinta bulshada, iyo xayeysiisyada daabacan. Xaqiiqdii, 5.3 tirilyan oo xayeysiis ah ayaa lagu muujiyaa internetka sanad kasta Maadaama aan la kulanno xayeysiin aad u badan, sidee xayeysiistayaasha iyo suuqleyyaashu u hubiyaan in xayeysiisyadooda ay istaagaan? Psychology.
Xayeysiisyo waaweyn ayaa laga helayaa jawaabta shucuur ahaan ama caqli gal ah. Jawaabta shucuurta ah ee xayeysiiska ayaa saameyn aad u weyn ku leh ujeedka macaamilka ee ah inuu iibsado marka loo eego nooca xayeysiiska dhabta ah. Adoo ku biiraya han, jacayl, guulo gaar ah, damqasho, kalinimo, saaxiibtinimo, ama xusuus - waad laba jibaari kartaa heerka jawaabta ee xayeysiintaada.